Cheap Disc Fatịlaịza igwekota igwe na ndị na - emepụta igwe na nrụpụta ọrụ | YiZheng
Gịnị bụ Disc Fatịlaịza igwekota igwe?
Na Disc Fatịlaịza igwekota igwe agwakọta akụrụngwa, esịnede a discgwakọta diski, a ogwe aka ogwe aka, a etiti, a gearbox ngwugwu na nnyefe usoro. Ihe e ji mara ya bụ na e nwere cylinder a haziri n'etiti etiti diski a na-agwakọta, a na-edozi ihe mkpuchi cylinder na drum ahụ, ogwe aka na-agwakọta jikọtara ya na mkpuchi cylinder. Otu njedebe nke ihe na-akpali akpali na-ejikọ na mkpuchi cylinder gafere na cylinder ahụ, a na-ebugharịkwa ihe na-akpali akpali. Ihe mkpuchi ahụ na-atụgharị ahụ na-agbagharị, si otú ahụ na-akwọ ogwe aka na-akpali akpali ka ọ gbanwee, na usoro nnyefe nke na-eme ka ọkpụkpụ na-akpali akpali site na usoro nnyefe nke anọ.
Obere onye na-achị anụ ọhịa
L× W×. H
Kedu ihe eji eji igwe igwe ihe eji achọ ihe eji eme ihe?
Disc / Pan Fatịlaịza igwekota igwe a tumadi iji na-emepụta mixtures nke fatịlaịza ngwaọrụ. Onye na-agwakọta ihe na-emegharị site na ntụgharị na ihe ndị agwakọtara ga-ebufe site na ngwa ngwa na-esote usoro mmepụta ọzọ.
Ngwa nke Disc Fatịlaịza igwekota igwe
Na Disc Fatịlaịza igwekota igwe nwere ike ijikọ ihe niile dị na igwekota iji nweta ihe na-agwakọta nke ọma. A nwekwara ike iji ya dị ka agwakọta na nri akụrụngwa na dum fatịlaịza mmepụta akara.
Uru nke Disc Fatịlaịza igwekota igwe
Isi Disc Fatịlaịza igwekota igwe ahụ na polypropylene mbadamba ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara na-agbakọta, n'ihi ya, ọ dịghị mfe ịrapara na eyi na-eguzogide ọgwụ. The cycloid agịga wheel reducer nwere àgwà nke kọmpat Ọdịdị, mfe ọrụ, edo akpali akpali, na-adaba adaba oruru.
(1) ndụ ogologo ndụ, ike ịzọpụta na ike ịzọpụta.
(2) Obere size na ngwa ngwa akpali akpali ọsọ.
(3) Na-aga n'ihu na-ezute iji mezuo usoro mmepụta nke usoro mmepụta niile.
Disk Fatịlaịza Igwekota Video Display
Nhọrọ Nhọrọ Diski fatịlaịza
Nke gara aga: Kwụ fatịlaịza igwekota
Osote: Ngwakọta fatịlaịza BB